ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - VirginiaCare
ဤဆိုရှယ်လစ်မူဝါဒသည် restore-virginity.com (“ ဆိုက်”) အားသင် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသပုံကိုဖော်ပြသည်။
ဆိုက်ကိုသင်လည်ပတ်သောအခါသင်၏ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အချို့၊ ဆိုက်နှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သင်၏ဝယ်ယူမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ သင်ဖောက်သည်များထံမှအကူအညီတောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရယူနိုင်သည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီကို (အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအပါအ ၀ င်)“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်” အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်၊ အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါစာရင်းကိုကြည့်ပါ။
စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ဥပမာများ - ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၏ဗားရှင်း၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ အချိန်ဇုန်၊ ကွတ်ကီးသတင်းအချက်အလက်၊ မည်သည့်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကိုသင်ကြည့်ရှုသည်၊ ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့်ဆိုက်နှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံသည်။
စုဆောင်းရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် - သင့်အတွက်ဆိုက်ကိုတိကျစွာတင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဆိုက်အသုံးပြုမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ရန်။
စုဆောင်းမှု၏ရင်းမြစ်: သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကို cookies များ၊ log files များ၊ web beacons များ၊ tags များသို့မဟုတ် pixel များ သုံး၍ အလိုအလျောက်စုဆောင်းသည်
စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ဖော်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Processor ကို Shopify နှင့်အတူမျှဝေခဲ့သည် နှင့် Paypal
စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ဥပမာများ - အမည်၊ ငွေတောင်းခံလွှာလိပ်စာ၊ သင်္ဘောလိပ်စာ၊ ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်များ (ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များအပါအဝင်)၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်
စုဆောင်းရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် - ကျွန်ုပ်တို့၏စာချုပ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊ သင်၏ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စီစဉ်ခြင်း၊ သင့်အားငွေတောင်းခံလွှာများနှင့် / သို့မဟုတ်အမှာစာအတည်ပြုခြင်းများပေးရန်၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားပေးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေထားသောသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအချက်အလက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာများကိုသင့်အားပေးပါ။
စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ဖော်: ကျွန်ုပ်တို့၏ processor ကို Shopify နှင့် Paypal တို့နှင့်မျှဝေခဲ့သည်။
စုဆောင်းရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် - ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုပေး။
အဆိုပါဆိုက်သည်အသက်မပြည့်သေးသောလူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ် ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမစုဆောင်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပြီးသင်၏ကလေးသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေးထားသည်ဟုယုံကြည်ပါကဖျက်ရန်တောင်းဆိုရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းဆက်သွယ်ပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်သင်နှင့်သဘောတူစာချုပ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။ ဥပမာ:
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးကို Shopify လုပ်ရန် Shopify ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဒီမှာ Shopify သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ https://www.shopify.com/legal/privacy.
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်၊ ဆင့်ခေါ်စာ၊ တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အခြားတရားဝင်ဖြစ်သောတောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များဆိုက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဂူဂဲလ် Analytics ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီနေရာမှာဂူးဂဲလ်ကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ https://policies.google.com/privacy?hl=en.Google Analytics မှဒီနေရာမှလည်းထွက်နိုင်ပါသည်။ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
သင်၏ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုမှု၊ သင်၏ဝယ်ယူမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များနှင့်တိုက်ရိုက်စုဆောင်းသည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များ (သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ သင်သဘောတူနိုင်သည်) ကွတ်ကီးများသို့မဟုတ်အခြားအလားတူနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်း။
ပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာခြင်းသည်မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Network Advertising Initiative (NAI) ပညာရေးစာမျက်နှာသို့သွားပါ http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Facebook စာအုပ် - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
ဘင်း - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]
ထို့အပြင်၊ ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ထဲကနေဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ဖယ်ထုတ်ခြင်းပေါ်တယ်ကိုသွားပြီး - http://optout.aboutads.info/.
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ ရောင်းရန်အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်သင်၏မှာကြားလွှာကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၊
အထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေ (“ GDPR”) အရသင်သည် အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ (“ EEA”) တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါဥပဒေများအောက်တွင်ဆောင်ရွက်သည် -
သင်ဆိုက်ကို ဖြတ်၍ အမှာစာတင်သောအခါသင်ဤအချက်အလက်အားဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမတောင်းဆိုမှီနှင့်သင်၏မှတ်တမ်းများကိုသင်၏မှတ်တမ်းများသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ သင်၏ဖျက်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ 'သင်၏အခွင့်အရေးများ' အပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် EEA တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်သင့်အပေါ်တရား ၀ င်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အခါသို့မဟုတ်အခြားသင့်အားသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်သည့်အခါ (ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပါ ၀ င်သော) အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသင်ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
We [မလုပ်ပါနှင့်] ဖောက်သည်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ တရားဝင်သို့မဟုတ်အခြားအရေးပါသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအပြည့်အ ၀ အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဆက်ဆာ Shopify သည်သင့်အားတရား ၀ င်သို့မဟုတ်အခြားအရေးပါသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိသောလိမ်လည်မှုကိုတားဆီးရန်အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုကန့်သတ်သည်။
အကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေသော IP လိပ်စာများကိုယာယီငြင်းဆန်သည် ဒီ denylist နာရီအနည်းငယ်အဘို့အဆက်လက်တည်ရှိ။
denylisted IP လိပ်စာများနှင့်ဆက်စပ်ခရက်ဒစ်ကဒ်၏ယာယီ denylist ။ ဤသည် denylist ရက်အနည်းငယ်အကြိမ်ဆက်လက်တည်ရှိ။
အကယ်၍ သင်သည် EEA တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကသင့်တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုသို့သယ်ဆောင်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ခြင်းကိုတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်ဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးလိုပါကအောက်ပါဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအိုင်ယာလန်တွင်အစပြုပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကနေဒါနှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်အပါအ ၀ င်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထပ်ဆင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ဥရောပပြင်ပသို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။ အချက်အလက်လွှဲပြောင်းမှုများသည် GDPR နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုပိုမိုသိလိုပါက Shopify's GDPR Whitepaper တွင်ကြည့်ပါ။ https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.
သင်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်မင်းအကြောင်းငါတို့ပိုင်တဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ အဲဒါကို ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ဆီပို့ပြီးမင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုပြန်ပြင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ၊ မွမ်းမံသည်၊ ဖျက်သည်။ သင်သည်ဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးလိုလျှင်အောက်ပါဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အကယ်၍ သင့်ကိုယ်စားဤတောင်းဆိုမှုများကိုသင့်ကိုယ်စားတင်ပြရန်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုသတ်မှတ်လိုပါကအောက်ပါလိပ်စာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Cookie ဆိုသည်မှာသင်၏ဆိုက်ကိုသင်လည်ပတ်သောအခါသင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) စက်ထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့, စွမ်းဆောင်ရည်, ကြော်ငြာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ cookies များကိုအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောကွတ်ကီးများစွာကိုအသုံးပြုသည်။ ကွတ်ကီးများက ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားသင်၏လုပ်ရပ်များနှင့်နှစ်သက်မှုများ (login နှင့်ဒေသရွေးချယ်ခြင်း) ကိုမှတ်မိစေရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ browsing အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆိုဒ်သို့သင်ပြန်သွားသည့်အခါတိုင်းသို့မဟုတ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်းဤအချက်အလက်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။ Cookies များသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားလူအများအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းလားသို့မဟုတ်မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်သူများလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
_ab admin မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ဆက်သွယ်မှုတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
_ လုံခြုံမှု _ session_id စတိုးအသွင်အပြင်ဖြင့်အညွှန်းနှင့်ဆက်စပ်။
လှည်း စျေးဝယ်ခြင်းလှည်းနှင့်ဆက်စပ်။ အသုံးပြုသည်။
လှိုင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်။ အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
လှည်း ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်။ အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
checkout_token ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်။ အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
လျှို့ဝှက်ချက် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်။ အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
လုံခြုံမှု ဖောက်သည်ရဲ့ login နှင့်ဆက်စပ်။ အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
စတိုး ဖောက်သည်ရဲ့ login နှင့်ဆက်စပ်။ အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အစီရင်ခံခြင်းနှင့် Analytics မှ
_ ခြေရာခံ _ အကြောင်းအရာ ဦး စားပေးခြေရာခံခြင်း။
_ မြေပြင်စာမျက်နှာ ဆင်းသက်စာမျက်နှာများကိုခြေရာခံ
_s ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု Shopify ။
_shopify_fs ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု Shopify ။
_shopify_s ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု Shopify ။
_shopify_sa_p Shopify ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစျေးကွက် & ရည်ညွှန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော။
_shopify_sa_t Shopify ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစျေးကွက် & ရည်ညွှန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော။
_shopify_y ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု Shopify ။
_y ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု Shopify ။
သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင် cookie တစ်ခုကျန်ရှိနေသည့်အချိန်ကာလသည်“ persistent” (သို့)“ session” cookie ဟုတ်မဟုတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Session cookies များသည်သင် browsing ကိုရပ်တန့်သည်အထိဆက်လက်တည်ရှိပြီးတည်မြဲသော cookie များသည်၎င်းတို့သက်တမ်းကုန်ဆုံး (သို့) ဖျက်သည်အထိကြာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookies အများစုသည်မြဲမြဲတည်ရှိနေပြီးသင်၏စက်ထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့် နေ့မှစ၍ မိနစ် ၃၀ မှ ၂ နှစ်ကြားတွင်ကုန်ဆုံးလိမ့်မည်။
သင်သည် cookies များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ cookies များကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအားဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်အပြည့်အဝလက်လှမ်းမှီတော့မည်မဟုတ်ပါ။
Browser အများစုသည် cookies များကိုအလိုအလျောက်လက်ခံသော်လည်းသင့် browser ၏“ Tools” (သို့)“ Preferences” menu တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သင်၏ browser setting ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်၊ သို့မဟုတ် cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ထုတ်ခြင်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်၏ browser ၏အကူအညီဖိုင်တွင်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော site များမှတွေ့ရှိနိုင်သည်။ www.allaboutcookies.org.
ထို့အပြင် cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များကဲ့သို့သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့မျှဝေခြင်းကိုလုံးဝတားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ သင်၏အခွင့်အရေးများကိုအသုံးချရန်သို့မဟုတ်ထိုပါတီများကသင်၏သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရန်အထက်ပါ“ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြော်ငြာခြင်း” အပိုင်းရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
သတိပြုရန်မှာ“ Do Not Track” အချက်ပြမှုများကိုမည်သို့တုန့်ပြန်ရမည်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ တစ်သမတ်တည်းမရှိသောကြောင့်သင်၏ browser မှဤအချက်ပြမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာစုဆောင်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှုအလေ့အကျင့်များကိုမပြောင်းလဲကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီအားမကြာခဏမွမ်းမံနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်သင်တိုင်ကြားလိုပါကအောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ [အီးမေးလ်လိပ်စာ] သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
137 Moo 9, Banglamung, Chon Buri 20150, ထိုင်းနိုင်ငံ